पहिलो सेक्समा हुनसक्ने जोखिम - Everest Dainik - News from Nepal
पहिलो सेक्समा हुनसक्ने जोखिम
डा. दिनेश बाँस्तोला । नेपाली समाज जति आधुनिकतातर्फ दौडिएको देखिए पनि यौनको मामिलामा अझै अनुदार नै छ । यौन शिक्षा अहिले पनि बराबर छैन । न विद्यालयमा यसबारे कुनै चर्चा हुन्छ न घरमा कसैले यसबारे केही बताउँछन् । त्यसैले कतिपय राजीखुसीमा, कानुनअनुसार पनि यौन सम्बन्धका लागि योग्य भइसकेका जोडीलाई यौन सम्पर्कमा बारेमा साधारण जानकारीसमेत नभएको पनि पाइन्छ ।
याे पनि पढ्नुस सेक्स, स्क्याण्डल र चिन्तन
याे पनि पढ्नुस सेक्स गर्न खोज्दा मेरो लिंग उत्तेजित हुँदैन, श्रीमती वा मलाई कुनै रोग लागेको त होइन ?
ट्याग्स: डा. दिनेश बाँस्तोला, सेक्स